Baraasaabka Migori oo lagu caddeeyay inuu yahay aabaha ilma ku jiray uurkii hooyadii oo geeriyootay | Star FM
Home Wararka Kenya Baraasaabka Migori oo lagu caddeeyay inuu yahay aabaha ilma ku jiray uurkii...
Baraasaabka Migori oo lagu caddeeyay inuu yahay aabaha ilma ku jiray uurkii hooyadii oo geeriyootay
Waxaa maanta maxkamad ku taalla Nairobi kasoo hormuuqday barasaabka ismaamulka Migori Okoth Obado iyo laba eedeysane kale, oo loo haysto dilka haweeney uu xiriir la ahaa guddoomiyaha dowlad deegaankaasi.
Sarkaalka dowladda u dhexe ee falanqeeye baaritaanada Kimani Mungai ayaa sheegay in natiijooyinka baaritaanadi caafimaad ee lagu sameeyay barasaabka Migori ee hiddadasidaha DNA-ka uu boqolkiiba 99 muujninaya inuu yahay aabaha ilmihii uurka ku jiray ee la geeriyoodi hooyadii oo lagu magaacaabi jiray Sharon Otieno.
Sharon ayaa la kulantay barasaabka Migori Okoth Obado bishii Nofeembar ee sanadkii 2017-kii, xilligaas oo ay arday ka ahayd jaamacadda Rongo.
Mr Obado ayaa lagu eedeeyay in canuga ay haweenaydaas uurka ku siday uu aabo u ahaa inkasto uu iska fogeeyay.
Si kastaba baaritaan lagu sameeyay meydka Sharon Otieno ayaa lagu ogaaday inay u dhimatay dhiigbax ka dib markii dhowr meel laga galiyay mindi.
Next articleDHAGEYSO:Xildhibaanka galbeedka Wajeer oo xariga ka jaray dugsiga sare oo wiilasha iyo gabdhaha ah